Ny iPhone 13 vaovao dia misy fanohanana roa eSIM | Vaovao IPhone
Manohy mamoaka ny vaovao rehetra momba ny karazana iPhone vaovao natolotr'i Apple taminay ny talata lasa teo izahay. Ny iPhone 13 vaovao sasany izay na dia toa maodely mitohy aza izy ireo dia mitondra fanatsarana maro izay noresahina ary ny sasany izay hitantsika tsikelikely. Ny iPhone XR sy XS zokiny indrindra dia nampiditra ny fanohanana ny eSIM, karatra virtoaly iray ahafahantsika mampiasa nomeraon-telefaona roa miaraka. ankehitriny ny iPhone 13 vaovao dia mitondra antsika ny fahafahan'ny fampiasana eSIM roa miaraka. Tohizo ny famakiana fa lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra.
Ary izany tokoa mihabetsaka ny mpandraharaha manome antsika ny fahafaha-mampiasa eSIM fa tsy SIM mahazatra (na ara-batana). Ny iPhone 13 sy ny iPhone 13 Pro (ary ny kinova Mini sy Max) dia mamela ny Dual SIM mampiasa SIM mahazatra sy eSIM, ary Dual eSIM araka ny iantsoan'ny Apple azy. Zavatra hahafahantsika mampiasa eSIM roa miaraka. Inona no dikan'ity? fa raha mampiasa eSIM isika ary na inona na inona antony dia mila laharana hafa isika ary tsy manome antsika ny mety ho SIM mahazatra izy ireo, dia afaka mametraka eSIM hafa amin'ny iPhone.
Zavatra muary ilaina indrindra indrindra rehefa mandeha izahay ary manefa tariby telefaona vaovao. Indraindray izy ireo dia mampiandry antsika handray SIM ary toy izao handeha haingana kokoa ny zava-drehetra raha eo amin'ny toe-javatra efa misy eSIM izahay. Zava-baovao kely izay miaraka manao ny iPhone 13 safidy iray hodinihina ho an'ireo rehetra izay mieritreritra fanovana. Tsarovy fa ny kaomandy an'ity iPhone 13 vaovao ity dia hanomboka amin'ity zoma 17 septambra ity ary manomboka handray azy ianao amin'ny 24 septambra. Ary ianao, manombatombana ny fanovana ny iPhone 13 ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba ny vaovao nampidirin'i Apple tao amin'ny iPhone 13?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny iPhone 13 vaovao dia misy fanohanana roa eSIM